Melaneziàna mpanao gazety, miampanga ny loza mitatao tsy mitsaha-mitombo amin’ny fahalalahan’ny asa fanaovana gazety · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Novambra 2019 14:55 GMT
Solontena avy amin'ny Vovonana voalohany momba ny fahalalahan'ny asa fanaovana gazety Melaneziàna. Loharano: Pacific Islands News Association, sary an'i Georgina Kekea
Nihaona tao Brisbane, Aostralia ireo mpanao gazety avy any Fiji, Vanuatu, Nosy Solomona, Papoazia Ginea Vaovao sy Papoazia Andrefana, mba hanatrika ny fitokanana sy fanombohana ny Vovonana momba ny fahalalahan'ny asa fanaovana gazety Melaneziàna izay nokarakaraina ho famaliana ny ‘fitomboana tsy mitsaha-mitombon'ny famoretana atao amin'ny media’ ao amin'ny faritra.
Nasongadin'ny fanambaràna nivoaka farany avy tamin'izany ireo loza mitatao manjo ny fahallahan'ny media ao Melanezia:
Mitombe be ireo karazana loza mitatao amin'ny fahalalahan'ny media. Tafiditra anatin'izany ireo lalàna maneritery, ny fandrahonana, ny rahom-bava politika, ny fanenjehana sy fandrahonana ampiasàna ny lalàna, ny fanafihana sy herisetra ataon'ny polisy sy ny tafika, ny fampidirana am-ponja tsy ara-dalàna, ny fanararaotana ety anaty tambajotra, ny fanavakavahana eo amin'ireo vondrom-poko sy ireo fandrahonana efa atrehan'ireo mpanao gazety mandrakariva hatry ny ela, indrindra fa ireo mpanao gazety tanora sy ny vehivavy izay mety sady hiatrika herisetra any am-piasany sy any an-tokantranony ihany koa.
Nangatahan'ireo mpandray anjara ny governemanta ao Melanezia mba “hanaja ny media sy hanome azy ny toerana sahaza azy ao anatin'ny fifanakalozandresaka eo amin'ny firenena” ary “hiantoka ny fitoniana ho an'ireo mpanao gazety eny am-panatontosana ny asan'izy ireo”
Melanezia. Loharano: Wikipedia, Oceania_ISO_3166-1.svg: Mpampiasa:Tintazul, Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Isankarazany ireo olana noresahana nandritra ilay vovonana, toy ny fanarahamaso, ny fepetra any amin'ny toeram-piasàna, ny fiovàn'ny toetrandro, ary ny fiantraikan'ny media sôsialy. Nanangona antontan-kevitra ihany koa i Philip Cass, tonian-dahatsoratry ny Revion'ny asa fanaovangazety ao amin'ny Pacific Media, momba ny fivoriana iray mahakasika ny sasantsasany amin'ireo fanamby atrehan'ireo vehivavy mpanao gazety:
Tamin'ny fiafaran'ny tapakandro maraina, nisy fivoriana manokana niresahana ny zavatra iainan'ireo vehivavy mpanao gazety, nahitàna ireo vehivavy mpanao gazety, mpamoaka lahatsoratra ary mpanao gazety miasa tena izay nilaza olana iombonana.
Anatin'ireny ireo fangatahan-dry amin'ireo lehilahy anaovany antsafa mba haneho ‘fanajàna’, ny resaka herisetra manjo ireo vehivavy any amin'ny toerana maro samihafa sy ireo fomba nentindrazana momba ny andraikitra maha-lahy na maha-vavy.
Fotoana iray tsy nampoizina tao amin'ilay vovonana ny famelarana ny sainan'ny fahaleovantenan'i Papoazia Andrefana. Faritany iray ao Indônezia i Papoazia Andrefana, toerana tsy azon'ireo vahiny mpanao gazety hidirana. Nihamafy ny fifanenjanana tato anatin'ny taona vitsivitsy satria tohizan'ireo vondrom-poko sasany ny fanamafisany ny zony hizaka tena.
A powerful moment at the end of Prof. David Robie's Pre-Conference Keynote Address tonight. Thank you to those who attended. #WestPapua #MediaFreedom #MMFF pic.twitter.com/hmg8SdLQF7
Fotoana iray nafàna tany amin'ny fiafaràn'ny lahatenin'ny Prof David Robie ny nanazavany ny fandaharanasany androany alina. Misaotra an'ireo nanatrika. #PapoaziaAndrefana #FahalalahanAsaFanaovanaGazety #MMFF
Namoaka fangatahana manokana nalefa ho an'ireo governemantam-pirenena ihany koa ny Vovonana ho an'ny asa fanaovana gazety melaneziàna. Ho an'i Papoazia Gine Vaovao, nangatahana ny governemanta mba ‘hanaja ny fahaleovantenan'ireo trano famoahambaovao sy ireo mpanao gazety'’ ary ‘hanamafy ny lalàna fiarovana ny ady amin'ny kolikoly sy ireo mpitoroka mba hampiatiana ireo mpanao gazety sy ireo matihanina avy amin'ny media”. Ho an'i Fiji, notakiana amin'ny governemanta ny hanafoanana ny didim-panjakana momba ny media, izay ‘milaza sazy henjana ary ny fanjavozavoan'ireo fandikandalàna lazainy dia misy fiantraikany manempotra ny media malalaka.’ Ho an'i Vanuatu, nantsoin'ireo mpandray anjara ny governemanta hiverin-dàlana tsy hanafoana ny fahazoandàlana hiasa nomena an'i Dan McGarry, talen'ny media ao amin'ny Daily Post.
Nolazain'i MacGarry fa nolavina ny fahazoan dàlany noho izy manakiana ny fitomboan'ny dindon'i Shina ao Vanuatu. Vao mainka niharatsy ny toedraharahany satria noraràna tsy hahazo miditra ao Vanuatu izy taorian'ny nanatrehany ny Vovonana ho an'ny Fahalalahan'ny asa fanaovana gazety Melaneziàna.
Arahaba daholo, ity ny vaovao:
Omaly aho dia noraràn'ny Sampandraharaha misahana ny fifindramonina ao Vanuatu tsy hahazo miverina mamonjy ny ankohonako. Tsy nahazo alàlana hiakatra tao anaty fiaramanidina aho.
Governemanta iray tsy mamela ny vahoakany hahafantatra ny momba ny fitomboan'ny dindon'i Shina no manasamantsàmaka ny ankohonako. Ho avy tsy ho ela ny fanambaràna.
Scott Waide, mpanao gazety avy any Papoazia Gine Vaovao, nanoratra antso iray tamin'ny anaran'ireo mpandray anjara hafa:
Amin'ny maha-mpikambana ahy ao anatin'ny Vovonana ho an'ny fahalalahan'ny asa fanaovana gazety melaneziàna, miray feo amin'ireo mpiaramiasa amiko aho mitaky ny governemanta ao Vanuatu hamela an'i Dan McGarry hahazo ny fahamendrehana sy ny haja mendrika ho azy.
Zavadehibe ny fiarovan'ireo governemanta VOAFIDINTSIKA ny fahalalahan'ny media melaneziàna. Izay rehetra famelezana manjo ireo mpikambana amin'ny media dia famelezana koa ny fahalalahan'ny vahoaka haneho hevitra .
Tsy azon'ny governemanta melaneziàna atao ny mody manaja ireo fifanarahana iraisampirenena sy ireo firotsahany amin'ny resaka fahalalahana demaokratika no sady, mandritra izany fotoana izany, manome baiko hametrahana hisatra amin'ny zon'ireo mpanao gazety mba tsy ho afaka hiteny.
Tamina fampanantenana iray ‘hametraka tambajotra ho fanampiana ireo mpandray anjara hamaly malaky sy amin'ny fomba mahomby ireo loza mitatao amin'ny fitonian'ireo mpanao gazety na ny fahalalahan'ny media’ no namiintinan'ilay fanambaràna farany avy amin'ny vovonana ho an'ny fahalalahan'ny asa fanaovana gazety melaneziàna izany.